Iyo Apple Park Yevashanyi Center yapera | IPhone nhau
Iyo inozivikanwa webhusaiti AppleInsider ndeimwe yeavo vane basa rekuparadzira nhau kuti zvimwe kana zvishoma isu tese takatoziva kubva munaGunyana wapfuura, apo iyo femera pachayo yakaunza yayo iPhone 8, 8 Plus uye iPhone X paSteve Jobs Theatre. Iwo mabasa mukamuri yakavharwa achiri kushanda nhasi, asi pane zvishoma kuruboshwe kuti zvinhu zvese zvigadzirire uye chimwe chezvivakwa chingadai chapera iVisitor Center iyi.
Neiyi nzira, kuwedzera kune yepakati mhete pachayo panogara mahofisi makuru, mamwe ese ekunze mahofisi uko vamwe vashandi vakaiswa kubva munaKubvumbi apfuura, nzvimbo yekupaka kana iyo Steve Jobs Theatre pachayo vakatopedzwa zvachose.
Tsananguro dzekuvaka dzakaonekwa mwedzi wega wega mune dzakasiyana mavhidhiyo akatumirwa nevatyairi vezvidhori uye Apple pachayo mumifananidzo yavo yepamutemo, asi mune ino nzvimbo yevaenzi imwe yezvikamu zvakakosha zveyakavharirwa.
Iyi ine yakasimba magirazi madziro nemakona akapoteredzwa, iyo panoramic inotarisa nechepakati chikamu cheApple Park inoita kuti ifanane zvakanyanya nezvitoro zvine mahwindo mahombe ayo anotendera iwe kuti uone kunze zvakakwana uye mune ino kesi yakanyatsoenderana neApple Park. Kumucheto kwekumaodzanyemba kwechivako kune nzvimbo yekudyira ine matafura mukati akatarisana nenzvimbo hombe yekufamba, kumwa kofi, kana kungoenda kunze.
Apple Park yaive kurota kwaSteve Jobs, uye zvishoma nezvishoma nzvimbo huru iyi iri kupedzwa. Iye zvino hatina kumbove nedrone vhidhiyo kwenguva yakareba, chimwe chinhu chaive tsika yemwedzi nemwedzi iyo Apple pachayo inogona kuve nebasa rekubvisa. Chero zvazvingaitika, ichi chiumbwe chikuru chichava musha wezviuru zvevashandi veApple, zvapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo Apple Park Yevashanyi Center yapera
Iyo iPhone X ichavanza zvirimo zvezviziviso nekutadza, iwe unogona futi.